Gen. Siciid Dheere oo ka warbixiyey hawlgallada buuraleyda Golis
March 1, 2015 (GO)- Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Puntland Gen. Siciid Dheere ayaa ka warbixiyey hawlgallada lagula dagaalamayo Al-shabab ee ka socda buuraleyda Golis.
Gen. Siciid oo ka qayb galay barnaamijka Martida Maykarafoonka ee idaacadda VOA, wuxuu sheegay in ciidamada Puntland dagaalka guul weyn kasoo hoyeen lana wareegeen deegaanno badan oo Al-shabaab fariisin u ahaa kuwaasoo tuulada Galgala kamid tahay.
Wuxuu sidoo kale xusey in ciidamadu u ruuqaansadeen dhulka fog ee buuraleyda ah iyagoo gaarey deegaanno qiyaastii 75km ka durugsan laamiga.
Mar uu ka hadlayey khasaaraha ay soo gaarsiiyeen Al-shabaab wuxuu sheegay in laga soo bilaabo bishii December ee sanadkii hore laga diley siddeetan dagaalyahan in ka badan boqolna laga dhaawacay. Khasaaraha soo gaarey dhanka ciidamada dowladda wuxuu tilmaamey inuu yahay mid kooban oo ah dhimashada afar iyo toban askari iyo dhaawaca labaatan kale.
Mar wax laga weydiiyey sababta horumarka ciidanku sameeynayaa gaabiska u yahay wuxuu ku sababeeyey dhulka oo buurley ah, jidadka oo yar iyo cimilada oon wanaagsaneyn.
Gen. Siciid Dheere waa ka gaabsadey inuu faah faahin ka bixiyo xiisadda ka dhalatay xil ka qaadis lagu sameeyey qaar kamid ah saraakiisha laamaha ammaanka isagoo beeniyey in sababta uu Garowe ugu soo laabtey arrinaas salka ku hayso.
Ocotober 1, 2014 ayey ahayd markii ciidamada Puntland si rasmi ah ula wareegeen tuulada Galgala oo istaraatiijiyad ahaan qiimo weyn u lahayd kooxaha Al-shabaab ee fadhigoodu yahay buuraleyd Golis.
Intii u dhexeysey December 2014 ilaa January 2015 ciidamadu waxay qabsadeen deegaanno hor leh oo Diindigle iyo Madashoor kamid yihiin, inkastoo markii dambe ay qaar kamid ah deegaanadaas dib uga soo baxeen. Saraakiisha ciidamada ayaa soo noqoshada ciidanka ku tilmaamey istaraatiijiyad dagaal.